पैसा नजोगिएर रिन लगेर हैरान हुनुहुन्छ ? राशी अनुसार यसो गर्नुहोस् ! - Mitho Khabar
June 23, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on पैसा नजोगिएर रिन लगेर हैरान हुनुहुन्छ ? राशी अनुसार यसो गर्नुहोस् !
कतिपय मानिस चाहेर पनि कर्जाबाट मुक्ति पाउँदैनन् । भएको सम्पत्ति अनुसार खर्च बढी हुदा“ वा दैनिक ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
खर्चलाई ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउने गर्दछ ।
कमाए पनि पैसा नै नजोगिने समस्याका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ होला ? ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
यस्ता समस्याका कारण धेरै पीडित भएका हुन्छन् तर यसको समाधान पनि छ ।
धर्मशास्त्रका अनुसार राशी अनुसार यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
मेष राशी: कर्जाबाट मुक्ति पाउनका लागी मेष राशीका ब्यक्तिले हरीयो रंगको गणेश मुर्ति
वा पिपल पातमा गणेश आकृती बनाई पूजा अर्चना गर्नुपर्छ । हरेक बिहान, गणेशलाई******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
दूबो अर्पित गर्नुपर्दछ । वृष राशी: वृष राशीका ब्यक्तिले देवी लक्ष्मीको बिषेश आरधना गर्नुपर्दछ ।
हरेक दिन रातो गुलाफको फुल अर्पित गरी लक्ष्मीको उपसना गर्नुपर्दछ । साथै शुक्रवारका दिन मिश्री दान गर्नुपर्दछ ।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
मिथुन राशी: कर्जाबाट मुक्ति पाउन मिथुन राशीका ब्यक्तिले हरेक मंगलवार ब्रत राख्नु पर्दछ । हनुमानजीको बिषेश आरधना गरी हनुमान मुर्तीको पाउ धुदा
धनयोगको संयोग बन्नेछ कर्कट राशी: कर्कट राशीका ब्यक्तिले कर्जाबाट मुक्ति पाउन सकेसम्म मांसाहारी भोजन गर्नु हुदैन । ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
सात्विक भोजन गर्नुपर्दछ । साथै हरेक बिहिबार केरा दान गर्नाले समेत कर्जा हट्नेछ *सिंह राशी: कर्जाबाट मुक्ति पाउन सिंह राशीका ब्यक्तिले शनिवार
पीपलको फेदमा सरस्युको तेलमा दियो बाली दिप दान गर्नु पर्दछ ।
साथै फलामको औठि धारण गर्नुपर्दछ ।कन्या राशी:कर्जाबाट मुक्ति पाउन कन्या राशीका ब्यक्तिले शिवजीलाई पानिमा तिल मिसाएर उक्त जल अर्पण गर्नुपर्दछ ।
साथै शनिवारका दिन पारेर मिठो तथा गुलियो परीकार दान गर्नुपर्दछ । ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
तुला राशी: तुला राशीका ब्यक्तिले बिहिबार विष्णु सहस्त्रनामको पाठ गर्नुपर्दछ ।
सकेसम्म उक्त दिन पहेलो रंगको वस्त्र धारण गरेमा बिशेष लाभ हुने गर्दछ ।
वृश्चिक राशी: कर्जाबाट मुक्ति पाउन वृश्चिक राशीका ब्यक्तिले हरेक मंगलवार हनुमानजी
लाई तुलसीको दल अर्पित गर्नुपर्दछ । साथै बुधवार पशुलाई चारो ख्वाउनु पर्दछ ।
धनु राशी: धनु राशीका ब्यक्तिले हरेक बिहान भगवान विष्णु र देवी लक्ष्मीको पुजा उपासना गरे कर्जाबाट मुक्ति मिल्नेछ । साथै हरेक शुक्रवार कन्याहरुलाई सेतो मिठाई बाडेमा तत्काल धनयोग हुनेछ । मकर राशी: कर्जाबाट मुक्ति पाउन हरेक बिहान गणेशजीको आरधना र आरती गर्नुपर्दछ ।
साथै हरेक बुधवार गणेशजी लाई हरीयो रंगको इलाइची अर्पित गरी प्रसन्न बनाएमा धन प्राप्ती हुनेछ । कुम्भ राशी: कुम्भ राशीका ब्यक्तिले हरेक सोमवार
शिवलिंगमा गंगाजल अर्पित गर्नाले कर्जाबाट मुक्ति पाउनेछन् । सेतो रंगको रुमालमा सेता अक्षता पूजा स्थानमा राखेमा धनयोग बन्नेछ मीन राशी: कर्जाबाट
अन्य समाचार दशा आफुलाइ जतिसुकै सबारे पनि, आफ्नो नामको अगाडी-पछाडी
जतिसुकै बिशेषणहरु जोडेपनि, ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*************
हामीलाइ एउटा धृणित सत्यको दुर्गन्धले सधै पछ्छाई राख्ने छ ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*************
त्यो हो हामी संसारको कंगालतम् देशहरु मध्यको एक देशका नागरीक हौ। कारण के हुन सक्ला? के हामी भोतिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु आज
हाम्रो समाजले आत्म समालोचना गर्नको लागी सोध्नु पर्ने भएकोछ। ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
दिएर, भारतबाट बिदेशी मन्द्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमताबान छन; तर हामीसंग बिजुलि निकाल्ने बिध्या छैन; हामी त्यसैले गरीब छौ।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
हाम्रा हिमालहरुले हामीलाई प्रसस्त बिदेशी मुन्द्रा दिन सक्छन; तर हामीलाई पर्यटन ब्यबसायको ज्ञान छैन, बिदेशीमुन्द्रा तान्नसक्ने कला छैन; हामी त्यसैले
गरिब छौ।सधै भुइचालो गैरहने ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
समुन्द्री तुफानहरुले सताइ राख्ने भुमिलाई जापनिजहरुले, एक उदाहरणीय देशको रुपमा चिनाए। हामी जहिले पनि देशको भुपरिबेष्ठितालाई दोष दिदै उम्कन
खोज्छौ। ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
यथार्थमा हामीलाई कंगाल बनाउने हाम्रो आफ्नो अप्रगतिशील समाजिक संरचनाहो, हाम्रो आफ्नो गलत धारणा हो, हाम्रो आफ्नो कुसंस्कार हो, हाम्रो आफ्नो
आलशीपन हो, हाम्रो आफ्नो दुर्गतिशील बिचारधारा हो।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस******
हाम्रो भोतिक कंगालपन हाम्रो बैचारिक कंगालपनको प्रतिबिम्ब मात्र हो।हामी यति कंगाल छौ कि आफ्ना पुर्बजहरुले कमाईदिएको अमुल्य मणिलाई, नचिनेर
ढुङगा सरह ठान्छौ। त्यसको ज्वलन्त उधाहरण हो “दशा”।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
मुक्ति पाउन मीन राशीका ब्यक्तिले नित्य सूर्य देवलाई बिहान जल अर्पित गर्नुपर्दछ । साथै हरेक आइतबार गाईलाई सख्खर र रोटि ख्वाउनाले साता भित्रमा
धनयोग बन्नेछ ।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********